भविष्यमा लाइफ कोच बन्ने सपना छ  - मिस नेपाल - नारी
भविष्यमा लाइफ कोच बन्ने सपना छ
अरुसँग तुलना गर्ने बानी आजैदेखि त्याग्नुपर्ने रहेछ । तुलना गर्ने हामी हरेकको बानी हुन्छ । म अहिले कुनै पनि कुराको टेन्सन लिन्नँ । जे भैरहेको छ, त्यसलाई भैरहन दिन्छु ।
मिस नेपाल इन्टरनेसनल–२०१९ मीरा कक्षपति २३ वर्षअघि भक्तपुरमा जन्मिएकी हुन् । कक्षपतिले अक्टोबर २५ मा जापानमा हुने मिस इन्टरनेसनल–२०१९ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।
बाल्यावस्थामा नेगेटिभ थिएँ
ममा बाल्यावस्थामा निकै नेगेटिभ सोच आउँथ्यो । मलाई कसैले मतलब गर्दैनन्, मेरो केही भ्यालु छैन, म केही गर्न सक्दिन भन्ने भावना थियो । म हरेक कुरासँग भाग्थें ।
मेडिटेसनले परिवर्तन भएँ
म विगत ४ वर्षदेखि मेडिटेसन गरिरहेकी छु । यसबाट मैले लभ योर सेल्फ अर्थात् आफूले आफूलाई माया गर्न थालेपछि मेरो जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आयो । मेडिटेसन नै मेरो जीवनको अभिन्न अंग भयो । हामी हरेक व्यक्तिको दिमागमा विभिन्न विचार आउँछन् । विचारले भावना जन्माउँछ अनि भावनाले प्रतिक्रिया जनाउँछ । हामीले जनाउने प्रतिक्रियाले हाम्रो चरित्रलाई प्रस्टाउँछ । चरिक्रले हामी कस्ता व्यत्ति हौं भन्ने जनाउँछ । मानिसले गर्ने अति नै राम्रो अथवा नराम्रो काम उसको चरित्रले निर्धारण गर्छ, त्यो उसको सोचमा भर पर्छ । सोचलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मेडिटेसनले निर्धारण गर्छ । यदि हामी सबैले बाल्यकालदेखि नै मेडिटेसन गर्न थाल्ने हो भने ठूलो भैसकेपछि कुनै पनि नराम्रो काम गर्न सक्दैनौं ।
लभ योर सेल्फ नै गुरु मन्त्र
लभ योर सेल्फ भनेको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो । पहिलो पटक सुनेपछि म उक्त वाक्यप्रति यति आकर्षित भएँ कि मेडिटेसनलाई आफ्नो जीवनकै अभिन्न अंग बनाएँ । पहिले ममा प्रशस्त नकारात्मक सोच आउँथे, धेरै बोल्न सक्दिनथें । कसैले मेरो मतलब नगरेजस्तो लाग्थ्यो । आफूमा भएका कमी–कमजोरीलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने रहेछ । अरुसँग तुलना गर्ने बानी आजैदेखि त्याग्नुपर्ने रहेछ । तुलना गर्ने हामी हरेकको बानी हुन्छ । म अहिले कुनै पनि कुराको टेन्सन लिन्नँ । जे भैरहेको छ, त्यसलाई भैरहन दिन्छु ।
बोली नै मेरो ट्यालेन्ट
विडम्बना म थोरै ट्यालेन्ट भएकी युवा हुँ । बोली नै मेरो ट्यालेन्ट हो । अहिले म विभिन्न स्कुल–कलेजमा गएर मेडिटेसनका बारेमा घन्टौं बोल्न र बुझाउन सक्छु । बाल्यावस्थामा ज्योतिषीले यी बालिकाले बोलेरै खान्छिन् भनेका थिए रे ।
हरेक व्यक्तिका लागि मेडिटेसन जरुरी छ । त्यसमा पनि बालबालिकाहरूलाई अझ बढी आवश्यक छ । म इमोसनल अवेरनेसनका लागि स्कुल–कलेजहरूमा पुगिरहेकी हुन्छु । धेरैलाई थाहा छैन, आफूले आफूलाई माया गर्न जानेपछि जीवन धेरै सुन्दर हुन्छ । रुनुपर्छ तर रुवाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ म हरेक व्यक्तिलाई जीवन जिउने कला सिकाउन चाहन्छु । त्यसबाहेक मेरो अरू कुनै योजना छैन । ध्यान र जनचेतनाका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने इच्छा छ ।
म आफै भोगी हुँ । त्यसैले यसमा काम गर्ने सोच पुरानै हो । मिस नेपालमा पाएको सफलतासँगै मेडिटेसन क्षेत्रमा अझ खुलेर काम गर्न सक्छु । यो उपाधिले मलाई एउटा प्लेट फर्म दिएको छ ।
मिस नेपालपछिको परिवर्तन
मिस नेपालअघि म एमसी मीरा कक्षपतिका नामले मात्र चिनिन्थें, अहिले मेरो नामको अगाडि मिस नेपाल इन्टननेसनल थपिएको छ । ममा आएको पहिलो परिवर्तन यही नै हो । यो उपाधिले आफू थप जिम्मेवार भएको अनुभव गर्न थालेकी छु ।
असार २, २०७६ - सेभ योर लाइफ
जेष्ठ १४, २०७६ - कसले पाउला ‘गीत’ बन्ने अवसर ?
वैशाख २५, २०७६ - किन देखिन्छ डरलाग्दो सपना ?
प्रियंका रानीलाई ‘मिस नेपाल वल्र्ड’को ताज असार ५, २०७९
नम्रता ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२०’ पुस २, २०७७
नम्रता श्रेष्ठको शीरमा सजियो मिस नेपाल वर्ल्ड २०२० को ताज मंसिर २२, २०७७
मिस नेपाल नर्थ अमेरिका–२०१९ भाद्र ६, २०७६